Sidee ayaa ay idiinku suuragashey in heerka dhibaatada aad ka hoos marisaan kan xaaladda degdegga ah? Markii ay buuxsameen xerooyinka cusub oo aan dad cusubna lagu soo biirineynin, ayaa hawshu ay ahayd in la bixiyo cunto, korjoogteynta nafaqo-xumada ba’an ee carruurta iyo qabashada hawlaha la-socodka cudurrada si wax looga qabto cudurrada dillaaca. Xerada Kobe, oo ay ku jireen qaxooti 25,000 qof ah oo dadka ku geeriyoonayana ay aad uga badnaayeen heerka ugu hooseeya marka ay xaalad degdeg ahi jirto (1 qof oo ka dhinta 10,000 qof maalintii), waxaan ku khasbaneyn in aan la dagaallanno jadeeco dilaacdey (cudur marka ay nafaqo-xumo weheliso aad loogu dhiman karo), oo aan qabanqaabinno olole tallaal oo ballaaran oo ku wajahan carruurta 15 sano jirka ka yar.
Roob yar ayaa ka da’ay Soomaaliya. Qaxootigu ma rabaan in ay noqdaan? Qaarkood wey rabaan in ay noqdaan waana ayba noqonayaan in kasta oo uu dagaal socdo. Waxaa ay u noqonayaan in ay ka